15 akanakisa rpg mitambo ye iphone uye Android (2015 edition)
Kuru Nhau & Ongororo 15 akanakisa RPG mitambo ye iPhone uye Android (2015 edition)
15 akanakisa RPG mitambo ye iPhone uye Android (2015 edition)
Tinogona kunge tisati tave neDiablo yeApple ne iPhone, asi izvi hazvireve kuti kune maan & apos; t mimwe mitambo yekutamba (RPG) pane nhare. Isu tinosvetukira mukudzika kweGoogle & apos; s Play Store uye neApple App Store kuti tiwane gumi nemashanu akanakisa RPG mitambo yaunogona kutamba kusvika parizvino muna 2015.
Nepo paine zvakati wandei zvekutanga RPG kuburitswa kwe iPhone neApple, it & apos; hazvigoneke kuita kutenderera kwakadaro pasina kutaura nezve mamwe maPC echinyakare ayo achangobva kuchinjirwa ekugunzva skrini. Nekuda kwebasa risingachinjiki remitambo situdiyo senge Square Enix, nhau dzakanaka ndedzekuti isu tine inozivikanwa Super Nintendo (SNES) Yekupedzisira Yekufungidzira akateedzana anowanikwa pane ese ari maviri Android uye iOS. Mune ino runyorwa, isu & apos; takaedza zvakare kupa kumwe kuburitswa kuchangobva kuburitswa izvo zvisingakanganise pahunhu, asi kana iwe uine imwe yamboburitswa RPG anodikanwa, usazeze kugovera mazita muchikamu chemashoko pazasi peizvi chinyorwa.
Pasina imwezve ado, inguva & maapos ekutanga neiyo kuverenga pasi: heino gumi nemashanu akanakisa Android uye iPhone RPG mitambo kusvika ikozvino muna 2015.
# 15: Nzira inoenda kuDragons
Mutengo: Mahara (nekutenga-mukati-app): Dhawunirodha pa ios , Android
Mugwagwa unoenda kuDragons haupenye nenyaya dzakapenya kwazvo - uto risinganzwisisike uye rakaipa Giant Gorger Dragons anotora nyika, achiisiya murima kwemakore gumi nemanomwe, kudzimara gamba rashevedzwa kununura vanhu kubva paudzvinyiriri hwavo, asi Gameplay iri kuita. Zvakawanda zvezviito muMugwagwa unoenda kuDragons zvinoiswa panzvimbo dzechesi-senge dzehondo dzakazadzwa nezvikara uye mabhokisi epfuma, kwaunosarudza imwe yenzira sere dzinokwanisika. Iwe unofanirwa kusarudza nzira yekurwira chaiyo uye kune vakuru vemashato (uye mukomana, akakura) kumagumo echitsauko chese, uye zvese zvinoshanda kune mumwe mutambo wakanaka wehurukuro yemahara.
Mugwagwa unoenda kuDragons
# 14: Chinjanai Magamba 2
Mutengo: $ 2.99: Dhawunirodha pane ios , Android
Chinjanai Magamba 2 inoratidzira inonakidza yehondo modhi uko iwe unosvetuka kuti uchinje gamba rako uye wosarudza kurwisa chaiko, uye unoshamisa mutambo wakanaka-wekutamba mutambo kwaunoumba timu yako uye nekuitungamira kuburikidza nemamishini akasiyana. Uine magamba masere akasarudzika, anopfuura gumi nzvimbo nyowani, pamwe nemhando dzinopfuura makumi matatu dzakasiyana dzevavengi, iwe unowana yakawanda yako matatu-madhora ekudyara.
Chinjanai Magamba 2
# 13: Joe Dever's Lone Wolf
Mutengo: $ 0.99: Dhawunirodha pane ios , Android
Mashup ebhuku rezvemitambo neRPG, Joe Dever & apos; s Lone Wolf inoratidzira mifananidzo yakakura uye inyaya inonyudza inotenderera yakatenderedza Lone Wolf, angave murwi wemamonya aine mamwe mafupa muhombodo yake muchimiro cheyakaipisisa yapfuura (uye yazvino). MuChiito 1, iwe unotanga kuvandudza gamba rako uye izvo ndizvo zvega zviito zvaunowana pamutengo we $ 1, nepo Mutemo 2, 3, uye 4 iwe & apos; d unoda kuburitsa imwe yekuwedzera $ 4.99 pachiito. Isu tinoda iyo system yehondo muLone Wolf, nehupenyu hwayo (iyo & apos; yakafanana nehondo muFinal Fantasy), uye iyo nyaya inotanga kumonyorora mushure mechiito chechipiri.
# 12: Kuderera
Mutengo: $ 1.99: Dhawunirodha pane ios , Android
Lowlander mutambo unofemerwa neiyo Ultima dzakateedzana. Mariri, iwe unotora chinzvimbo chemufambi-mufambi uyo anova knight, uye anofanirwa kuzadzikisa akasiyana quests anobva kuna mambo. Iine nyika hombe yekutsvaga, izere nemarinda uye zvakapambwa, mutambo unonzwa uzere nemikana, uye madhiraivhu akagadziridzwa zvakanaka kune ekugunzva sikirini, kuti ugone kutamba neruoko rumwe chete.
Siralim irumwe rudzi rweiyo RPG isina seti inoguma. Iyo ine yekushanduka-yakavakirwa muhondo element, asi iyo & maapos; s zvakare nezve kuvaka hwaro uye kuvhima loom mumatanda-akagadzirwa-matongo. Sarudza chinangwa chako, uye uve nechokwadi chekuti mutambo ucharamba uchikanda mabhosi akaoma uye mazamu matsva kuti uongorore.
Mutengo: $ 2.99: Dhawunirodha pane ios
Kupinda kunze kwepamusoro gumi, SwapQuest ine nzvimbo ine mukurumbira, iri mashup huru yepuzzle / RPG mutambo. Mumutambo uyu, unonangisa gamba rako kuburikidza nemunda wakaiswa tiles wakanangana nekubuda, uye kuchinjanisa mataira kunokutendera kuti uchinje mafambiro uye utore zvimwe zvakapambwa, kana kudzivirira njodzi. Wedzera chinhu chemuunganidzwa wedombo waunoshandisa kutenga gamba rako zvombo zvitsva nezvombo, uye unotanga kuwana pfungwa yeSwapQuest. Iwe zvakare une yekumisikidza system, vakaoma-kurova-mabhosi, uye zvimwe zvakawanda zvekuita kuti urambe uchivaraidzwa pasina kubhowa.
# 9: Evoland
Mutengo: $ 4.99: Dhawunirodha pane ios , Android
Evoland kuuya kutsva kwePhones uye zvishandiso zveApple, uye mutambo unonakidza wepakutanga une leitmotif yekukufamba iwe nenhoroondo yekutamba. Mune toni iyi, mutambo unotanga mu monochrome, uye nekukurumidza unochinja kuisa ruvara, kufamba kwemahara, hondo, uye nezvimwe zvakawanda. Isu takafarira Evoland nekuremekedza kwayo mazita ekutanga, asiwo nezano rayo rekutanga.
# 8: Icewind Dale: Yakawedzerwa Edition
Mutengo: $ 9.99: Dhawunirodha pane ios , Android
Icewind Dale izita rechinyakare rakaburitswa kare Windows mamwe makore gumi nemashanu apfuura muna 2000. Vatambi vechikuru (sesu) vachayeuka nyaya yacho, asi heino kukurumidza kudzokorodza vatsva: zvese izvi zvinotanga mushure mekugadzirwa kwemafaro evashanyi (iwe unogona kusarudza anosvika matanhatu magamba emarudzi akasiyana uye makirasi aunogadzira gare gare) ayo anova muchengeti wekaravhani sezviitiko zvisinganzwisisike zvichizaruka. Iyo nyaya inosunungura kuti iratidze hunyengeri hwedhimoni hunotyisidzira Gumi Guta reI Icewind Dale, uye rako basa ndere iro remununuri.
# 7: Baldur's Gate 2: Yakagadziridzwa Edition
Imwe yakasarudzika PC zita kubva ino yegoridhe zera reRPGs raive gore 2000, Baldur & apos; s Gate 2 inyika yakakura isometric yekuongorora uye inokodzera mapiritsi. Inozivikanwa kwemaawa ayo mazana matatu emutambo (zvinotora mwedzi nemwedzi kuti upedze), unodzora pati yemavara matanhatu. Iyo rongedzero yakaiswa munzvimbo dzakakanganikwa uko iwe uine anoshamisa mamonya uye mashiripiti, uye zvese zvinoitika mushure mezviitiko zvekutanga Baldur & apos; s Gedhi: gamba nebato zvatorwa, gamba rako rinomuka muchizarira uye rinoedza kutiza kubva kune yakaipa wizard Jon Irenicus.
Baldur & apos; s Ghedhi 2
# 6: Iyo Banner Saga
Viking-yakafemerwa tactical RPG, Iyo Banner Saga inokupa iwe ne2D nharaunda yemaoko yakadhirowewa kurwa, anopfuura makumi maviri nemashanu mavara mumatanho manomwe akasiyana, uye mutambo wakasarudzika wakasarudzika apo sarudzo dzako dzinokanganisa zvakanyanya nyaya.
# 5: Mweya Yakatsauka
Mutengo: $ 6.99: Dhawunirodha pane ios , Android
Mweya yakatsauka chiito-mutambo weyakajairika wakavakirwa kukurumidza kutamba uye huwandu hukuru hwekukosha kwe replay. Yakafuridzirwa naSpelunky, Chakavanzika chaMana, uye mutambo wedu wekare, Mage Gauntlet. Maitiro akagadzirwa akasarudzika mazinga anoreva kuti pese paunotamba mutambo, iwo & apos; s chakasiyana chiitiko. Mune Mweya Yakatsauka, iwe unodzora mumwe wevatanhatu mavara, vese vaine yavo yakasarudzika mitambo yekutamba, kugona, uye zvishandiso.
# 4: Order & Chaos Pamhepo
Kana iwe uchida inonyudza MMORPG senyika yeWarcraft pafoni yako, Order & Chaos ndiyo nzira yakanakisa yekuenda nenharaunda inofamba yevatambi, uye zviri pasi zvakaenzanisirwa zvekufungidzira nyika uye vashanu vatambi vakasarudzika kusarudza kubva (Elves nevanhu. kurwira Order, Orcs uye Undead yeChaos, uye maMendel haana kwaakarerekera). Iwe unosarudza yako murume kana murume, chitarisiko, kirasi uye tarenda, uye unokwanisa kuunganidza unosvika kumazana maviri nemazana mashanu emabasa uye unowana zvakaringana zviuru zvishanu zvezvidimbu zvemidziyo
# 3: Battleheart Nhaka
Battleheart Legacy inokutendera kuti uongorore hupfumi uye hwakadzama hwekufungidzira nyika, gadzirisa rako rakasarudzika gamba nemakumi mazhinji ehunyanzvi hune simba uye zvinhu, kurwa nemauto evavengi, kusangana neanopenga vatambi uye uwane nyaya dzenharaunda inotambudzika. Izvo & maapos zviri kwauri kuti usarudze kuti uchave wizard ine simba here, kana mukurumbira une mukurumbira.
# 2: Dhiragoni Kutsvaga V
Mutengo: $ 14.99: Dhawunirodha pane ios , Android
Dhiragoni Kutsvaga V inofungidzirwa kuti ndiwo mutambo wakanakisa muiyo Dragon Kutsvaga nhaurwa ine yakadzika uye yakareba-inosimudzira nyaya, pamwe nebhodhi-yakavakirwa muhondo system kwaunotenderedza dhayeti kuti uone mhedzisiro.
Dhiragoni Kutsvaga V
# 1: Yekupedzisira Yekufungidzira VI
Mutengo: $ 15.99: Dhawunirodha pane ios , Android
'Hondo yeMagi yakasiya zvishoma asi madota nekusuwa mukumuka kwayo. Kunyangwe mashiripiti pachawo akange anyangarika kubva pasirese. Zvino, chiuru chemakore gare gare, vanhu vakagadzirisa nyika kuburikidza nesimba resimbi, pfuti, injini dzemhepo, uye mimwe michina uye matekinoroji. Asi kune mumwe ane simba rakarasika remashiripiti - musikana wechidiki zita Terra uyo Humambo hwakaipa hwaakachengeta muuranda mukuyedza kusunga simba rake sechombo. Izvi zvinotungamira kumusangano wakashata pakati peTerra nejaya rakanzi Locke. Kupukunyuka kwavo kunorwadza kubva kuhutongi hwemaMambo & apos kunogadzira nhevedzano yezviitiko zvinobata hupenyu husingaverengeke uye zvinotungamira kumhedziso isingadzivisike. '
Yekupedzisira Kufungidzira VI
amazon prime day piritsi inobata
Chii chinonzi Mini-LED uye kuti inofananidzwa sei neOLED?
Yako iPhone's Night Shift haizokubatsire kurara zvirinani, kudzidza kunowana